कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट मृत्युदर उच्च « Anumodan National Daily
कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट मृत्युदर उच्च
By : मुकेश टेंर्रा
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १५:०२
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको संक्रमणको कारण मृत्युदर उच्च देखिएको छ ।
सोमबारसम्म तीन हजार दुई जनामा एन्टिजेन पोजिभिट देखिदा ३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नयाँ भेरियन्टको संक्रमणका कारण शरिरमा अक्सिजन कम भएर पछिल्लो एक सातामा ३५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने त्यो भन्दा पहिले सोही भेरियन्टको संक्रमणबाट ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म सुदूरपश्चिममा एक सय २६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिममा कोरोनाको पुरानो भेरियन्टबाट १६ हजार छ सय ९० जना संक्रमित हुँदा ८७ जनाको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिममा कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट मृत्युदर १ दशमलव ३ छ भने पुरानो भेरियन्टबाट मृत्युदर शुन्य दशमलव ५ छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनलायको रेकर्ड अनुसार सोमबार सबै भन्दा धेरै ११ जना संक्रमितको नयाँ भेरियन्टको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । नयाँ भेरियन्टको संक्रमणका कारण शरिरमा अक्सिजन कम भएर बैशाख १९ गते ८, १८ गते ४, १७ गते ४, १६ गते ६, १५ र १४ गते एक/एक जनाको मृत्यु भएको थियो । एक महिनादेखि सुदूरपश्चिममा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्टका कारण त्यस अघि चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट संक्रमितर मृत्यु हुने दर उच्च छ । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार संक्रमितमध्ये प्रायःसबैमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएको छ । तिमध्ये अधिकांशलाई निमोनियाको समस्या छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर निराजनदत्त शर्माले विरामीहरुले अस्पतालमा ढिलो पुग्नुले नै कोरोनाले संक्रमितलाई श्वासप्रश्वास र निमोनियाले ग्रसित बनाइरहेको बताए । ‘संक्रमितहरु ढिलो अस्पताल आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘भारतबाट आइरहेका संक्रमितहरुलाई पनि अस्पताल पुग्न ढिलो भइरहेको छ । विरामी भएपछि घरमै उपचार गर्न खोज्ने, उपचारमा गए पनि नजिकैको मेडिकलमा सामान्य चेक जाँच गराएर औषधि खाने गरेको भेटिएको छ । प्रायः संक्रमितहरुलाई हामीले मेडिकलमा सामान्य जाँच गराएर डाइफाइट र भाइरल ज्वरोको औषधि खाइरहेको भेटाएका छौं ।’
उनले रुघाखोकी, ज्वरो र टाउको दुःख्ने समस्या देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल पुगेर चिकित्सको सल्लाहमा पिसिआर गरेर मात्रै औषधि खानुपर्ने सुझाव दिए । ‘जथाभावी औषधि खाँदा तत्काल निको भएजस्तो लागे पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । गलत उपचारको लगत प्रभाव पर्छ नै ।’ उनले भने, ‘पछि गएर त्यसले झन धेरै समस्या निम्त्याइरहेको छ । त्यस्तै गरेको कारण संक्रमण झन जटिल भइरहेको छ । हामीले पिसिआर नेगेटिभ आएकालाई समेत कोरोना संक्रमणको अर्को क्याटागोरीमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं । अहिले औषधी खाइहाल्नु भन्दा पनि सबै किसिमको जाँच गरेर मात्रै औषधी खानु उपयुक्त हुन्छ ।’
उनले संक्रमितहरुलाई माइलेस, मोडरेट र सिरियस गरी तीन समूहमा विभाजन गरी उपचार गरिरहेको बताए । उनका अनुसार माइलेस संक्रमितलाई होम आइसोलेशनमा राखेर उपचार गरिदैछ भने मोडरेटमा अस्पतालको आइसोलेशन र सिरियस संक्रमितलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालको आइसोलेशन, आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेका संक्रमितहरुलाई अक्सिजनको आवश्यकता रहेको डा. शर्माले बताए । उनले प्रेसरले अक्सिजन दिनुपर्ने संक्रमितलाई सिलिन्डरको अक्सिजनले समेत नभ्याइरहेको बताए । ‘तत्कालका लागि सिलिन्डरको अक्सिजनले काम चलाइएको भएपनि दीर्घ रुपमा उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नै आवश्यक छ,’ डा. शर्माले भने, ‘प्रेसरले दिने अक्सिजन सिलिन्डरले पुग्दैन । ठूलो प्रेसर दिन सक्ने मेसिन नै चाहिन्छ ।’